Ra’isul Wasaarihii hore ee Somalia oo Eedeyn kulul u jeediyay Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka – STAR FM SOMALIA
Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Maxamed C/llaahi Farmaajo , oo la hadlay Warbaahinta Magaalada Muqdisho ayaa eedeeyn kulul waxa uu usoo jeediyay Madaxda sare ee Dowlada Federaalka gaar ahaan Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka.
Farmaajo ayaa sheegay in xiligan oo kala guur ah ay nasiib daro tahay in Madaxweynaha Soomaaliya iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ay fara galin ku sameeyaan liiska odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed ee 135-ta oday ee horey la isugu raacay.
Waxa uu xuay Farmaajo in Madaxweynaha iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka ay Liiska Odayaasha dhaqanka kusoo dareen Oday cusub ay iyagu wataan ujeedana ka leeyihiin, waxa uuna tilmaamay in tilaabadaasi ay dhaawaceyso kalsoonidii lagu qabay Madaxda.
‘ ‘Xiligan oo kala guur la joogo looma baahna musuq maasuq iyo wax isdaba marin, waa ayaan daro in Liiska Odayaasha dhaqanka ee lagu hesiiyay Oday cusub daaqada looga soo daro,” Ayuu yiri R/Wasaarihii hore ee Soomaaliya.
Hadalka Farmaajo ayaa imaanaya xili Odayaasha Dhaqanka Soomaaliyeed Madaxda sare ee Dowlada ay kusoo dareen Oday Cusub , waxaana arintan walaac xoogan ka muujiyay Siyasaiyiinta Soomaaliyeed iyo waliba Odayaasha dhaqanka.
Nabadoon iyo nin Ganacsade ahaa oo lagu toogtay Degmada Caabudwaaq